मौसम – Paluwa Khabar
काठमाडौं । अर्घाखाँची जिल्लामा साउन १६ गते(शनिबार) राति १२ बजेदेखि पुनः लकडाउन हुने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो । लकडाउन साउन ३० गते राति १२:३० सम्म जारी रहने छ । यस अवधिमा सरकारी तथा गैरसरकारी, सार्बजनिक तथा निजी यातायात, बैंक तथा वित्तीय संस्था पुर्ण रूपमा बन्द हुने भएका छन् । साथै खाद्यान्न बिक्रीका लागि किराना पसल लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म खोल्न दिईने भएको छ । जिल्लामा आजसम्म सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या ५१९ जना पुगेको छ । यसअघि दशौ साउन २० गते बुधवार राती १२ बजेसम्म एक हप्ता निषेधाज्ञा थपिएको थियो।अर्घाखाँची लगायत १७ जिल्लामा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
धनकी देवी लक्ष्मीले बताएका यि ५ प्रकारका व्यक्ति, जसको घरमा जति कमाए पनि सम्पती टिक्दैन (खर्च मात्र हुन्छ)
काठमाडौँ । हिन्दू शास्त्र अनुसार समुन्द्र मन्थन भन्दा पहिला स्वर्गका देवताहरु निर्धन भएका थिए । देवराज इन्द्रले लक्ष्मीको स्तुति गरेपछि धनकी देवी लक्ष्मी खुशी भएर इन्द्रलाई द्धादशाक्षर मन्त्र दिनको तीनपल्ट पाठ गर्न सुझाएका थिए विष्णुपुराणमा इन्द्रले धनकी देवी लक्ष्मीको स्तुति गरेका थिए । देवराज इन्द्रको अनुरोधमा देवी लक्ष्मीले मनुष्यमाथि कृपा गर्ने तर यी पाँच चीज घरमा भएमा धनको नोक्शान हुने बताएकी थिइन् । थाहापाउनुस् धनकी देवी लक्ष्मीले बताएका ती पाँच प्रकारका व्यक्ति जसको घरमा धनको बास रहन सक्दैन् । : काम भावनाः जुन घरमा स्त्री पुरुष अत्याधिक कामवासनामा लिप्त रहन्छन् त्यो घरमा धर्मको उपेक्षा हुने गर्छ । त्यस्तो घरमा लक्ष्मीको लामोसमयसम्म बास रहन सक्दैन् । अ’हंका’रः जुन घरका मानिस अ’हंका’र गरेर बस्छन् त्यहाँ अज्ञानता र क्रो’ध बढ्ने गर्छ । यस्ता घरमा पनि लक्ष्मीको बास हुनसक्दैन। लो
घरमा दियो बाल्दा यो दिशामा बाल्नुहोस आयु बढ्छ घरमा दियो बाल्दा यो दिशामा बाल्नुहोस आयु बढ्छ हिंदू शास्त्रमा दियो बाल्नु निकै शुभ मानिन्छ । यसैले धेरै मानिसहरु आफ्नो घरमा दियो बाल्ने गर्छन् । यसको उज्यालोले दु:ख कस्ट भाग्ने विश्वाश रहेको छ। बेदमा अग्नीलाई भगवान नै मानिएको छ । यसैले हिन्दू धर्ममा कुनै शुभ कार्य गर्नुपुर्ब भगवानको अघी दियो बाल्ने गरिन्छ । दियो बाल्ने धार्मिक र बैज्ञानीक दुबै कारण रहेको पाईन्छ । धार्मिक कारण दियो/उज्यालो ज्ञानको प्रतिक हो । पूजामा दियो बाल्नुको बिशेष महत्व रहेको छ । दियो बाल्नुको अर्थ हाम्रो जीवनको अज्ञान अन्धकार हटाइ जीवनमा ज्ञान ज्योति ल्याउनु हो । हाम्रो धर्म अनुसार पूजा गर्नु पहिला दियो बाल्नु अनिवार्य रहेको छ । आरती गरेर घ्युको दियो बाल्नाले सुख सम्पत्ति आउने विश्वाश गरिन्छ । यसो गर्दा घरमा स्थाइ रुपमा (सधैंको लागि) माता लक्ष्मीको बास हुने धार्मिक विश
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, बि´ल्कुलै बे´वास्ता नगरी पूरा पढेर सेयर ’गर्नुहोला
🙏सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्तता नगर्नुहोला, ॐ लेखि पूरा पढेर सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ।परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिं’गको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिं’गको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिं’गको अर्थ नपु’संकको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।आखिर के हो त शिवलिं’ग ? शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिं’ग भनिएको हो । स्कन
सल्यान । सल्यान सिद्दकुमाख गाउँपालिका ३ कल्याचाैरका भाेलाराम बाेहरा एउटा सुन्दर भविष्यका लागि १४ वर्ष अघि श्रीमती सँगै दाङ तुलसीपुर झरे । उनले मजदुरी गर्दै श्रीमती र सन्तानकाे रुपमा रहेकी एउटी छाेरीलाइ पालनपाेषण गर्दै आएका थिए । भाेलारामले टिप्पर चलाउँथे । श्रीमती र छाेरीलाइ तुलसीपुरकाे बेलुवामा काेठा भाडामा लिएर राखेका थिए । तर यहि बैशाख ७ गते चैते दशैंकाे दिन याे परिवारमा एउटा ठुलाे ब्रजापात भयाे ।** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ** पाल्पाकाे माथागढी गाउँपालिका ५ स्थित चुनढुङ्गा खानीकाे लागि उनले टिप्पर चलाउथे । चैते दशैकाे दिन आफैले चलाएकाे टिप्पर दुर्घटनामा परेर उनकाे मृ’त्यु भयाे । उनकाे मृ’त्युपछि अहिले श्रीमती र छाेरीकाे दाङमा बिचल्ली भएकाे छ । १२ वर्षीया छाेरी रितु बाेहरा घर नहुँदा तुलसीपुरकाे कालिका मन्दिरमा बुबाकाे कृ’या गरिरहेकी छन् । परिवारमा अरु काे
यी ३ राशिका मानिस जन्मिदै लिएर आउछन्, धन कमाउने योग, सानै उमेर देखि कमाउन थाल्छन् पैसा 241 काठमाडौ । तपाईलाइपनि अनौठो लागेको हुनुपर्छ कसैले कलिलै उमेरमा ह्वात्तै पैसा कमाउन थाल्छन् । उदाहरणका लागि अशोक दर्जी, सचिन परियाल, कमला घिमेरेहरु हेर्नुहोस् न भाडाकुटी खेल्ने उमेरमा नै पैसा र नाम कमाउन थाले । यो उनीहरुले जन्मिदै लिएर आएको योग हो । ज्योतिशी शास्त्र अनुसार मानिसहरुको भविष्यवाणी आफ्नो राशिहरुबाट हुन्छ । राशि जन्मिएको समयमा निर्धारित हुन्छ । तपाईको जन्म कुन कोखबाट भयो भन्ने हैन कुन समयमा भयो भन्ने प्रमुख कुरा छ । किनभने जन्म, विवाह, मृत्युको लागि पनि राशि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले १२ वटा राशिहरु मध्ये यी ३ राशिहरु भएको मानिसहरु चाहि एकदमै भाग्यमानी हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । उनीहरुले सानै उमेर देखि नै सुख , शान्ति र धेरै धन आर्जन गर्ने हुन्छन् । कन्या राशि : यो राशि हुने ब्यक्
मीनाक्षी अम्मान मन्दिर मीनाक्षी अम्मान मन्दिर एक महत्त्वपूर्ण भारतीय हिन्दू मन्दिर हो, जुन पवित्र शहर मदुरैमा अवस्थित छ। मन्दिर सुन्दरेश्वर (भगवान शिवको रूप) र मीनाक्षी (देवी पार्वतीको रूप) लाई समर्पित छ। ४ शानदार टावरहरू रहेको यो मन्दिरमा मुख्य देवताहरूको लागि दुई सुनौला गोपुरमहरू छन्, जुन विस्तृत रूपमा मूर्तिकला र चित्रित छन्। यो मन्दिर तामिल जनताका लागि महत्वपूर्ण प्रतीक हो, र हजारौं वर्षको अन्तिम जोडीको लागि उल्लेख गरिएको छ, यद्यपि वर्तमान संरचना १७ औं शताब्दीको शुरुमा निर्माण गरिएको थियो। अन्य समाचार दशा आफुलाइ जतिसुकै सबारे पनि, आफ्नो नामको अगाडी-पछाडी जतिसुकै बिशेषणहरु जोडेपनि, जस्तोसुकै सुविधा संग जिवन बिताए पनि, जिवनमा जतिसुकै उपलब्धि गरेपनि, हामीलाइ एउटा धृणित सत्यको दुर्गन्धले सधै पछ्छाई राख्ने छ; त्यो हो हामी संसारको कंगालतम् देशहरु मध्यको एक देशका नागरीक हौ। हामी कसरी
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि पूरा पढेर सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ यो पनि पढ्नुस : परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिं’
Posted in मौसम, समाचार
ध’नकि खानी,ध’नको देवी मानिने लक्ष्मी मातालाई प्र’सन्न गर्नको लागि मा’निसहरु अनेक प्रकारको उपाय र कार्यहरु गर्ने गर्दछन् ।महालक्ष्मीको पूजा र आ’राधना गर्नाले धन र स’मृद्धि प्राप्त हुने विश्वास समेत रहेको छ ।हिन्दु धर्मअनुसार, यदि तपाई देवी लक्ष्मीलाई खुशी राख्न र उनलाई आफ्नो घरमा आ’कर्षित गर्न सक्ष’म हुनुभयो भने धन र स’मृद्धिले तपाइलाई कहिले पनि छोड्ने छैन ।देवी लक्ष्मी धन, भा’ग्य, प्रे’म र सौ’न्दर्यकी देवीको रुपमा मानिन्छ। उनलाई चं’चल स्व’भावको पनि मानिन्छ किनकि उनि एकै ठाउँमा स्थायी रुपमा बस्न सक्दिनन् भन्ने वि’श्वास पनि रहेको छ । तपाईले दैनिक गर्ने केही कार्यहरुले लक्ष्मी माता प्र’सन्न हुने र जीवनमा प्र’शस्त ध’नलाभ गर्ने अवसर मिल्ने गर्छ। आज हामी तपाईहरुलाई ल’क्ष्मीको कृपा मिल्ने र ध’नलाभ हुने ५ सं’केतहरु बताऊन जाँदै छौँ। १. यदि तपाईले सपनामा पानी, हरियाली र लक्ष्मीको व’हन उ’ल्लु द
काठमाडौँ शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बनाएको खबटा हो, यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ। प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो यो समुन्द्रको किनार मा पाईने गर्दछ। धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ। तसर्थ यसलाई एक बाजाका रूपमा पनि लिइन्छ। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश आदि मुलुकमा यसको यसरी प्रयोग भएको पाइन्छ । शंख विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तीमध्ये दाहिना शंख बहुमूल्य मानिन्छ, जुन निकै महँगो हुन्छ । लाखौं शंखमा दाहिना शंख एउटा पाइन्छ । हिन्दू धर्ममा रामायण, महाभारतमा श
एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै (388)
मास्टर माइन्ड प्रचण्डलाई देउवाले दिए सरकारको सबै जिम्मा, माओवादीबाट नयाँ राष्ट्रपति को ? (262)
शिक्षकले राजनीति गरे जागिरै चट् पार्ने गरि यस्तो बन्यो कानून , पढ्नुहोस कानुन? (260)
आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, कस्को कति तलब वृद्धि ? (242)
माओवादी केन्द्रमा भुइँचालो , सोह्र सांसद एमालेमा प्रवेश ! नामावली सहित (233)
भर्खरै बिमान दु’ र्घटना हुँदा प्रधानमन्त्री सहित ११ जनाको मु’ त्यु , मनमा माया भए RIP लेख्नुहोला (217)
अब बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, यसरी प्राप्त गर्नुहोस्? (213)
पर्यटनमन्त्रीमा प्रेम आले (208)
बर्दियामा बँदेललाई थापेको वि’द्युतीय पा’सोमा परेर एकै परिवारका तीन जनाको ज्या’न गयो
१.	कञ्चनपुरमा एम्बुलेन्सले ठ’क्कर दिँदा साइकल यात्री ४५ वर्षीय कृष्णबहादुरको मृ’त्यु’ (33)
२.	यिनै हुन् लोक बहादुर जस्ले ६ जनाको ज्या ’न लिएका थिए (भिडियो सहित) (29)
३.	जसलाई आफ्नै भिनाजुले अविवाहित आमा बनाए (29)
४.	दया हुनेले फोटोमा छोएर रिप लेखिदिनु होला (28)
५.	भाइरल १२ छोरिका बुवाआमा मिडियामा, अपुत्रो भन्दै समाजले हेला गरेको भनाइ (भिडियो हेर्नुस) (28)
६.	केटा-केटाले धुमधामसंग गरे बिहे, सिन्दुर पोते नै लगाएर भित्राए (भिडियोसहित) (27)
७.	श्रीमानले फकाएर घर ल्याएको केहि दिनमै २५ बर्षिय गर्भवती रुपाको रहस्यमय मृ’त्यु (26)
८.	रुपन्देहीमा बुवाआमाले आफ्नै ९ महिनाको शिशुको घाँटी रे टेर ह त्या गरे,घ टना हुनुको पछाडी छ यस्तो कहालीलाग्दो रहस्य (भिडियो हेर्नुस्) (26)